Shirkii golaha ammaanka oo la soo xiray; shir ka dhici doona Muqdisho iyo Mahiga oo la siiyay kalsooni dheeraad ah – Radio Daljir
Shirkii golaha ammaanka oo la soo xiray; shir ka dhici doona Muqdisho iyo Mahiga oo la siiyay kalsooni dheeraad ah
Nairobi, May 25 – Shirkii maanta ka furmay magaalada Nairobi uuna soo qabanqaabiyey golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa caawa la soo afmeerey iyada oo fariimo miisaan culus la gaarsiiyay madaxda hay’ada federaalka KMG ah ee Soomaaliya.
Kulamada ay danjirayaasha waddamada ku jira golaha ammaanku ay la yeelanayeen dhinacyada ayaa waxa caawa fiidkii lagu soo gabagabeeyay shir jaraa’id oo ay qabteen labada shir-guddoomiye ee shirka oo kala ahaa danjiraha dalka Britian iyo kan South Africa. Labada danjire waxa shirka-jaraa’id ku weheliyay wakiilka xog-hayaha guud ee QM danjire Augustin Mahiga.
Khilaafka madaxda hay’adaha federaalka
Golaha ammaanku waxa uu aad u dhaliilay khilaafka joogtada ah ee madaxda federaalka, kadib kulan gaar ah oo ay la yeesheen madaxwayne Shariif Sh. Axmed iyo guddoomiye Shariif Xasan ayay ugu danjirayaashu ku cadaadiyeen in ay la yimaadaan af-garad looga bixi karo is-mari-waaga taagan. Danjirayaashu, waxa ay ku gooddiyeen in beesha caalamku ay joojin doonto deeqda ay siiso hay’adaha federaalka haddii ayan xal dag-dag ah ka gaarin khilaafkooda curyaamiyay howlaha baaxadda wayn ee looga fadhiyo dawladdu in ay meel-mariso.
Labada hogaamiye ayaa waxa ay shirka ka hor difaaceen mawaaqiftooda ku aaddan farsamada marxaladda kala-guurka, heseyeeshee wax garwoshiyo ah kama ayan helin shirka.
Marxaladda soo socota iyo dowrka Mahiga
Golaha ammaanka ayaa waxa ay u soo jeediyeen madaxda federaalka in shir wada-tashi lagu qabto magaalada Muqdisho bisha June ee soo socta. Shirkaas oo uu soo qaban-qaabin doono Danjire Mahiga ayaa looga codsaday madaxda Soomaalida in ay ku soo go’aamiyaan arrimo ay ka mid yihiin xilliga la qabanayo doorashada madaxda federaalka iyo waajibaadka u yaalla hay’adaha federaalku sidii ay u soo gudbin lahaayeen dastuurka federaalka una dhamayn lahaayeen xaaladda kumeel-gaarnimada.
Danjirayaashu waxa ay hoosta ka xariiqeen in ay si buuxda u taageersan yihiin una xoojinayaan doowrka danjire Mahiga, waxana dhinacyada u caddeeyeen in ay dhowrayaan wada-shaqayn buuxda oo lala sameeyo danjire Mahiga. Madaxda hay’adaha federaalka ayaa sidoo kale loo caddeeyay in jihadii ka hortimaadda wixii go’aan ah ee ka soo baxa shirka bisha June la qaban doono uu la kulmi doono tallaabooyin jawaab adag oo ay ku jirto in lagu soo rago cunaqabatayn siyaasadeed.
Maamullada iyo bulshada rayidka ah
Shirka waxa sidoo kale joogay maamullada Puntland, Somaliland iyo Galmudug oo dhammaantood isku mar la kulmay xubnaha golaha ammaanka. Maamulladan ayaan waxa ay qoraal ahaan ku soo gudbiyeen fikirkooda ku aaddan xalka is-mari-waaga madaxda federaalka iyo marxaladda kala-guurka. Golaha ammaanka ayaa soo dhaweeyay ra’yiga maamullada waxana ay ku ammaaneen xasilloonida ay ka abuureen goobaha ay maamulaan.
Ugu dambayntiina, golaha ammaanku waxa ay la kulmeen xubno ka socday bulshada rayidka ah kuwaas oo kala yimid Puntland, Somaliland iyo gobollada dhexe iyo koonfureed ee Soomaaliya. Madaxda bulshada rayidka ah ayaa iyaguna dhinacooda soo gudbiyay ra’yigooda ku aaddan sidii looga bixi lahaa marxaladda qallafsan ee ay Soomaaliya marayso. Golaha ammaanka ayaa bogaadin u soo jeediyay doorka bulshada rayidka ah, waxayna u ballan-qaadeen in ay la yeelan doonana xiriir dhow iyo wada-shaqayn.
Shirka bisha June lagu qaban doono magaalada Muqdisho wax waqti ah looma qaban, si kastaba ha ahaatee, natiijada shirkan golaha ammaanku ku qabtay Nairobi ayaa laga dheehan doonaan hadba sida uu u qabsoomo shirkaas lagu baaqay, natiijooyinka ka soo baxa iyo hadba sida loo fuliyo natiijooyinkaas.
Halkan ka dhagayso waraysi aan la yeelanay wariye Maxamed Axmed Ilkacase oo ku sugnaa goobta shirku ka dhacay.